March 2019 | Page 2 of 14 | Kichuu
BITEETOSSAA 31/2019 #Akeekkachiisa. Godina w/b/ona Eebantuu ganda lalisaa bakka saqalaa jedhamuuf. Bakka kanatti kora bittinneessaan maqaa eegumsa kaambii warra daandii hojjetanii jedhuun deebi’ee qubatee jira. #Garuu kaayyoon WBO adamsuudha.kunis uummataan wbon eessa jira eenyutuu deggera jedhanii [Read More]
Shame on the so called Ermias Legesse of ESAT media. Biyya diiga jenneeti malee viidiyoon yeroo Itoophiyaan tapha waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2010 nyaattu argisiisu harka keenya jira. Gaazexeessaa ESAT Eermiyaas legese Miidhaksaa Abbishuu [Read More]
Kaayyoo sabaaf wareegamuun, fedhii sabaaf abboomamuun, of dagatanii sabaaf jiraachuun Via Adem Misoma (Bitootessa 30,2019) Kaayyoo sabaaf wareegamuun, fedhii sabaaf abboomamuun, of dagatanii sabaaf jiraachuun lafee isaanii irraa biqile; dhiiga jaallanii irraa madde. Akkasiin irraa [Read More]
Rival capital camps must face Finfinnee facts By Olaana Abbaaxiiqi, March 29, 2019 Before addressing the highly charged issues surrounding the status of the capital of the federation and Oromia, there needs to be agreement [Read More]
Warri Oromon bilisaa bahe jirraa jedhu sun amma maale jedhu laata ? GALMEE HIDHAMTOOTA 2019 Godinaale Oromiyaa garagaraarra humnoota tikaa mootummaan ukkaamfamanii dararaama jiranii muraasa. 1. Dajanee Mammoo Amboorra. 2. Lammaa Fayyisaa Amboorra. 3. Jiksaa [Read More]
Qabsoon hadhooftudha! Kaayyoo jaallanii yoonan gurgure… Qabsoon hadhooftudha! Kaayyoo jaallanii yoonan gurgure… Lammiif jecha buuja’anii, sabaaf jecha huuqqatanii, bifa namummaa isaanii gatanii Gatii bilisummaa baasuf waadaa dhaloota guutuf, jiruu sadoo gatanii Jiruu dagalaa filatani Sabaaf [Read More]
Xiyyeeffannaa – Jaal Marroo 27-03-2019 Listen to “Xiyyeeffannaa-Jaal Marroo 27-03-2019” on Spreaker. Via Qalbeessaa Dhangala’aa tiin Gaazixeessaa Dhaabasaa fi Jaal Marroo haasaa waliin taasisan gara barreeffamaatti Qalbeessaa Dhangi’aatiin jijjiiramee jira. Dubbisaa! Haa tibbanaa irraa argattu, [Read More]
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 27, 2019 SBO Bitootessa 27,2019. Oduu, Godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa Onoota garagaraa keessatti waraanni mootummaa EPRDF kemikaala summa’aa ummata keessatti darbachuun miidhaa guddaa geessisaa jira jedhu jiraattotni. Kana [Read More]